जान्नुहोस् ! यस्ता छन् महिनावारी हुँदा बार्नु पर्ने वैज्ञानिक कारणहरु |
Home अन्तरवार्ता जान्नुहोस् ! यस्ता छन् महिनावारी हुँदा बार्नु पर्ने वैज्ञानिक कारणहरु
डा. राम बहादुर बोहरा -‍- हिन्दू धर्म संस्कृतिले केवल गलत नगर मात्र भन्न खोजेको देखिएको छ । कुनै पनि काम गर्दा भविष्यमा कसैलाई दु:खको सामाना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेको रहेछ किनकि त्यति बेला रोगको बारेमा जानकारी नहुनाले त्यो समयमा गर्भ रहदा अपांग, लुलो, लंगडो सन्तान नहोस् भनेर यो नियम लागु गरेको देखिन्छ ।
आज समाजमा महिनावारी हुँदा बार्ने प्रचलन धर्म संस्कृतिले कुनै विकृति नहोस् भन्न खोजेको मात्र देखिएको छ । आखिर किन बार्ने भन्ने कुरा हरेकले जान्न आवश्यक छ । २१ औं शताब्दी यता आउदा पनि यसको वैज्ञानिक कारणले स्थान पाउन सकेको छैन् । बास्तबमा महिनावारी भनेको सन्तान उत्पादन गर्न सक्षम भइसकेको संकेत मात्र हो । हरेक महिना एउटा असक्षम डिम्ब महिनावारीको रूपमा निस्कासन भएको हुन्छ । यतिबेला महिनावारीको रूपमा फोहोर रगत बाहिर गएको हुन्छ ।